AXKAAMTA SOONKA - Dersiga 4AAD – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA AXKAAMTA SOONKA – Dersiga 4AAD
Qofka muslimka ah ee soomman waxa la gudboon in uu ilaashado soonkiisa, kana feejignaado wax kasta oo dhaawac u keeni kara, sidoo kalena ku dadaalo in uu la yimaaddo sunnayaasha ajarkiisa kor u qaadaya, kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin:
1- SUXUURTA, suxuurtu (cuntada nuska danbe ee habeenkii la cuno), suxuurashadu way barakaysantahay sida uu Nebigu (N.N.K.H) sheegay, sidoo kale waa baadi-soocda soonka muslimka ee uu kaga geddisan yahay soonka diimaha kale.
2- DIB U DHIGIDDA SUXUURTA, waxa uu Anas –ARN- weriyey in suxuurta Nebiga -SCW- iyo salaadda subax ay u dhexaysay inta laga akhriyo konton aayadood oo keliya.
3- DEDEJINTA AFURKA, afurka oo la dedejiyaa waa sunne, waxa ka sugnaatay Nebiga (N.N.K.H) in uu yidhi: Umaddu khayr kama suulayso (khayr kama dhamaanayo) intay afurka dedejinayaan.
Fiiro Gaar: Had iyo jeer waxa aynnu aragna wakhtiga afurku dhowyahay dadka oo wada yaacaya, mid gaadhi wata iyo mid lugaynayaba, si miyir la’ oo waalli ah ayay dadka qaarkood u rooraan, waxaana dhacda in uu qofku shil galo, ma garanayo waxa eryaya!
Walaal afurkaagu hadduu dib kaaga yara dhaco soonkaagii buri maayo, adiguna dhiman maysid, ee dadka ha halligin adiguna ha ha is dhibin, si miyir qab ah aynnu goobaheenna afurka ku gaadhno.
4- KU AFURIDDA TIMIRTA, wuxuu Nebigu ku afuri jiray timirta teeda curubta ah (Rudab), hadduu waayana timir caadi ah, hadduu waayana biyo. Timirtu waa cunto aad ugu habboon afurka marka la eego maaddada ay ka sameysan tahay, waxaanay si degdeg ah u soo celisaa tamarta qofka, sidoo kale waxay u fiican tahay caloosha madhan.
5- DUCADA, waxa la gudboon qofka soomman in uu saacadaha uu soomman yahay iyo wakhtiga afurkaba ku dadaalo ducada. Ducada qofka soommanna lama celiyo sida Nebigu (N.N.K.H) uu sheegay.
6- Waxa kale oo ka mid ah waxyaalaha soonka in lagu dadaalo mudan, dhammaan acmaasha wanaagsan, sida sadaqada, salaatu laylka, Qur’aan akhrinta, cumraysashada iwm.
Waxyaalaha dhaawaca Soonka
Qofka soomman waxa looga baahan yahay in uu ka fogaado wax kasta oo soonkiisa dhaawici kara sida:
1- Cayda iyo hadallada xun xun, kaftan ka beenta ah iwm, ha ahaadeen kuwo qofku uu qaab hadal u gudbiyo ama ha noqdeen kuwo uu qoraal ahaan bulshada ula wadaago.
2- Dagaalka iyo gacan qaadka aan xaqa ahayn.
3- Waa in uu ka feejignaadaa in uu sandaarashada ku fogaado, marka uu waysaysanayo – in uu biyaha sanka aad ugu fogeeyo ilaa ay cunihiisa u gudbayaan-, Rasuulkaa reebay (N.N.K.H).
4- Qofka soommani waa in uu ka fogaado wax kasta oo dareenkiisa kicin kara, sababna u noqon kara in ay biyaha taranku ka yimaaddaan, sida in uu xaaskiisa dhunkado ama fara-ka-ciyaar, loolid iyo waxa la midka ah la wadaago.
5- Dumarka cuntada karinayaa way dhadhamin karaan waxa ay karinayaa, haddii ay ka maarmi waayaan, laakiin waa in ay ka feejignaadaan in dheecaanka cuntadu cunahooda u gudbo, sidoo kale ka feejignaadaan badsashada dhadhamintaas, inta ay ka maarmi karaanna ha ku dadaaleen.
Next articleFatahaada webiga Dawa iyo roobab mahiigaan oo khasaare Gaadhsiiyey Dawlad degan Somalida